Uhlahlo-lwabiwo-mali 2016 - Amandla.mobi isiZulu
Umsebenzi ophuma kwisebe lezimali lika zwe-lonke uthi uMphathiswa akasayi kwamkela mibono ngohlahlo-lwabiwo-mali emva kwangoMvulo umhla we-15 February 2016. Le ntetho yo Hlahlo-lwabiwo-mali ingayeyona ibalulekileyo kunazo zonke eMzantsi-Afrika kodwa uMphathiswa neSebe lezimali wohlulekile ukuqinisekisa ukuba abantu bathatha inxaxheba ngokuthi baveze imibono yabo ngezigqibo eziphathelene nezigidi zabantu. Kubalulekile ukuba sisebenzise amaqonga afanelekileyo ukunika uMphathiswa u Gordhan umkhombandlela wabantu. Njengokuba imbalela intlitha ilizwe jikelele, ukunqaba kwemisebenzi kuxakile, ixabiso lokutya nezinye izinto ezibalulekileyo ezifana nee-Pads liye lisenyuka, UMphathiswa kufuneka naye anyuse imali ejongane nokubonelelwa kwabantu kunye nentlalo-ntle. uMzantsi-Afrika unezinga lokungalingani eliphezulu emhlabeni jikelele, uMphathiswa u Gordhan kufuneka asebenzise amandla anawo ukuze aqinisekise ukuba iinkampani kunye nabo bazizigwili bayayihlawula irhafu njengoko kufanelekile.
iDemokhrasi eMzantsi-Afrika ayikokuvota kuphela. Ukuba thina njengabantu siyalawula, iinkokheli zethu maziqinisekise ukuba imali yethu yerhafu isetyenziselwa ukwakha isimo sezimali esilungileyo nesinobulungisa.